မင်းသမီး Han So Hee က မင်းသမီးကြီး Jeon Ji Hyun ထက်ပိုတော်ကြောင်း ချီးကျူးခဲ့ကြတဲ့ K Netizen များ – BaHuTuTa
November 3, 2021 admin Cele, International, K Waves 0
အင်တာနက် အသုံးပြုသူ K netizen များက မင်းသမီး Han So Hee က သူမရဲ့ စီနီယာ Jeon Ji Hyun ကို ကျော်လွန်နေပြီဆိုပြီး မှတ်ချက်များ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ လဆန်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ MK Economy နှင့် အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ မင်းသမီး Han So Hee ကို “ဒုတိယ Jeon Ji Hyun” လို့ netizen တွေက တင်စားခံရတဲ့ အပေါ် သူမခံစားချက်ကို မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။
Han So Hee ကတော့ “ဒီဘွဲ့ နာမည်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို အရင်ဆုံး တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်” လို့ နှိမ့်ချစွာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားမှ အင်တာနက် အသုံးပြုသူ တော်တော်များများကတော့ Han So Hee က Jeon Ji Hyun ထက်သာလွန်နေပြီဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း၊ ဇာတ်ကားသစ်များ သို့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်များတွင် သရုပ်ဆောင်မည့် မင်းသမီးကြီး Jeon Ji Hyun အနေဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကားမရိုက်ဖြစ်ပဲ ကြော်ငြာများသာ အများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဒရာမာ “Jirisan” ဟာ ပရိသတ်များရဲ့ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ မကိုက်ညီတာကြောင့် မကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်တစ်ချို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက် အသုံးပြုသူအချို့သည် Jeon Ji Hyun ကို မင်းသမီးအဖြစ်ပင် မစဉ်းစားတော့ဘဲ ကြော်ငြာမင်းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့သာ စဉ်းစားတော့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Netizen များရဲ့ မှတ်ချက်တွေကတော့
Han So Hee က Jeon Ji Hyun ထက် သရုပ်ဆောင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
‘Pretty’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက် ‘Cool’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးက Han So Hee နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တယ်။
သူမက ရုပ်ရည်နဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ မင်းသမီး မဟုတ်ဘူး Han So Hee က သရုပ်ဆောင် စွမ်းရည်လည်းကောင်းပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
“My Name” နဲ့ Han So Hee ကို My Name မှာ ကြိုက်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ မတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ မြင်သာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ Jeon Ji Hyun လား ဆိုတော့ Han So Hee က Jeon Ji Hyun ကို ကျော်နေပြီထင်တယ်၊ “Jirisan” က လတ်တလော လူကြိုက်များလှတာတော့မဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား?
ဒုတိယ Jeon Ji Hyun ? မဟုတ်ပါဘူး Han So Hee က Han So Hee ပဲ၊ သူ့ကို ဘယ်သူနဲ့မှ နှိုင်းစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ သူမလည်း Celebrity တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပုံစံအသစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တာကို “My Name” မှာတွေ့လိုက်ရတာ အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။
Han So Hee က လူသစ်ဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍအသစ်များစွာကို အမြဲ ကြိုးစားလို စိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီးတော့ Jeon Ji Hyun ကတော့ ကြက်ကြော် ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေရတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယာက်ပါ။
Jeon Ji Hyun ရဲ့ အရည်အသွေးတွေက “My Sassy Girl” နှင့် “Thieves”ပေါ် မှာ မူတည်ခဲ့တယ်။ အခု “Jirisan” က ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဒရာမာရဲ့ မကောင်းတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကြောင့် ခုလို ဖြစ်နေတာပါ။ အလားအလာအများကြီးရှိတဲ့ လူသစ်တစ်ယောက်ကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့။
သူမကို Jeon Ji Hyun နဲ့ ဘာကြောင့် ရုတ်တရက် နှိုင်းယှဉ်တာလဲ။ Han So Hee ကလည်း သူမ၏ အသက်အရွယ်ထဲမှာဆို အကောင်းဆုံး မင်းသမီး တစ်ယောက်ပဲ။
Jeon Ji Hyun က မင်းသမီးမဟုတ်ပါဘူး။ သူမက ကြော်ငြာ စတားတစ်ဦးပါ။
Jeon Ji Hyun သာ “My Name”မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် Han So He ရခဲ့တဲ့ အလားတူအောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့ Han So Hee က Jeon Ji Hyun ကို ကျော်လွန်နေပါပြီ။
စတဲ့ မှတ်ချက်များစွာ ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ မြန်မာ ပရိသတ်များအနေနဲ့ရော သူတို့ နှစ်ဦးအပေါ်ဘယ်လို မြင်ပါသလဲဆိုတာ မျှဝေပေးသွားကြပါဦး ။